Fotoana fametavetana momba ny orinasanao (Aza adino ny ahy) | Martech Zone
Alakamisy 12 martsa 2015 Alakamisy 12 martsa 2015 Douglas Karr
Nanomboka tamin'ny Tweet io…
Ny milaza fa voaroaka aho dia fanina kely fotsiny. Tsy afaka nitsahatra nihomehy aho tsara ve ity rap ity?n ary olona mbola tsy hitako mihitsy no nanao fikarohana. Dan Stokes io olona io.
Nanomboka i Dan Rappitt.com ary ho fanombohana mifamatotra ara-bola, dia nitady fomba tsy manam-paharoa hahazoana izany teny (mahazo izany?) mivoaka momba ny asan'izy ireo. Hitan'izy ireo ilay Martech Zone ary rehefa avy nijery ahy aho dia nanapa-kevitra fa ho lasibatra lehibe.
Tiako izany… varotra gorila sy marketing influencer daholo rapped ao anaty bitsika iray. (Nataoko indray io). Ity ny tantaran'i Dan:
Nanjary liana tamin'ny mozika aho, ary tamin'ny fanaovana rap manokana, 15 taona lasa izay. Rehefa nitombo ny fitiavako ny mozika dia tsapako fa te hanao an'ity safidy kariera ity aho… miova hevitra. Ao amin'ny Rappitt.com, tena tsapanay fa namorona sy nanao lafatra ny asa-taninay izahay, ny vokany dia vokatra izay miteraka fahasambarana sy fahatsiarovan-tena ho an'ny fotoana rehetra. Izaho dia nanao 100 tamin'ireo horonan-tsary ireo ho an'ny namana, mpiara-miasa ary mpandraharaha nandritra ny taona maro.
Ny vidin'i Dan dia tsy rariny loatra ho an'ity karazana famoronana ity ary bonus farany fotsiny ny farany. Fantatrao fa mila hira rap momba ny piraofilinao na ny orinasanao sa tsy izany?
Manantena aho fa mahazo baiko avy any aminareo i Dan noho ny paikadiny lehibe. Andao hanaporofo fa miasa ity karazana marketing influencer ity!
Tags: mampihomehyRapserivisy raprappitt